Ukuphathwa Okuphephile Kwezifafazo - Amagilebhisi elikhulayo eNingizimu Afrika
Ukuphathwa Okuphephile Kwezifafazo
Izifo nezinambuzane kumele zivinjelwe noma zilawulwe ngendlela enesibopho futhi akufanele zilimaze imvelo noma abantu. Phakathi nokuphathwa kwezifo kanye nezinambuzane kumele kuhlale kukhunjulwa ukuthi imikhiqizo yokudla ephephile nekhwalithi kufanele igcinwe. Ngakho-ke, okumele kugxilwe kuzo kufanele kube ezindleleni zokulima ezemvelo nezomphakathi.
Ukuze kufinyelele lokhu, lezi zinyathelo ezilandelayo kufanele zithathwe mayelana nezifo zokwelapha nemithi yokufafaza izinambuzane:
Abasebenzi abathintekayo ekulawuleni izinambuzane kufanele baqeqeshwe.
Uma usebenzelana namakhemikhali, abasebenzi kufanele baqaphele njalo.
Kufanele bafundele ilebula ngokucophelela.
Abasebenzi kufanele balondoloze imishini.
Gqoka njalo izingubo zokuzivikela ezifanele nokuzivikela.
Ungadli noma uphuze noma ungabhemi ngenkathi usebenzisa amakhemikhali.
Ungathinti ubuso noma isikhumba ngezandla ezinesifo bese ugeza izandla ngaphambi kokudla.
Geza ama-overalls ahlukaniswe nezingubo ezivamile futhi ungabuyeli ekhaya ngezingqimba ezingcolile.
Vimbela imithombo yamanzi engcolile, ungachitheli amakhemikhali emadamu noma emifuleni.
Izifo kanye nezinhlayiya zokulawula izinambuzane kumele zigcinwe ngokuvumelana neziyalezo kanye nokufinyelela ekugcineni kwamakhemikhali kumele kubekwe umkhawulo.
Qinisekisa ukuthi izaziso zokuphepha ziyatholakala ngendlela efanele.
Imishini ephuthumayo nemishini yokulwa nomlilo kufanele itholakale isetshenziselwa ukuhlanza uma ukungcola kwenzeka.
Vimbela ukusetshenziswa kabusha kweziqukathi zamakhemikhali ezingenalutho ngokusika izimbobo ezitsheni emva kokusetshenziswa. Qinisekisa ukuthi imindeni ehlala ezindaweni eziseduze iyaziswa kusengaphambili usuku lokuphalaza. Vala iminyango namafasitela bese ususa izingubo kusuka emgqeni wezingubo.
Abasebenzi akufanele bapake ezindlini zabo nkanti izingane akufanele zivunyelwe ukudlala epomphini yokufafaza. Izisebenzi akufanele zidlale noma zithwale ingane ngenkathi zigqoke izingubo ezingcolile ezingcolile lapho zibuyela ekhaya ukuyodla isidlo sasemini njengoba amakhemikhali angangena esikhunjeni somntwana. Abasebenzi abasenza ngezokufafaza kufanele bahlolwe kwezempilo ngonyaka.